Uhlaziyo lukaGoogle Drayivu lwe-Android seluhleli ispredishithi | I-Androidsis
I-Google Drayivu ye-Android yongeza umhleli kwiipredishithi
Ukusetyenziswa ngokusesikweni kwe I-Google Drayivu ye-Android (ngaphambili besisazi njenge Google Docs) usandula ukufumana uhlaziyo olubalulekileyo olulayishwe ngeendaba ezahlukeneyo, enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kukudityaniswa komhleli wemveli wespredishithi.
Ke, ngoku kwi-interface yeDrayivu ngokwayo siya kuba nethuba lokwenza njalo yenza amaspredishithi amatsha okanye uhlele enye esele siyigcinile kwiakhawunti yethu.
Nangona umhleli elula kakhulu xa kuthelekiswa ujongano lwewebhu kwaye asizukukwazi ukufumana imisebenzi eyahlukeneyo, inyani kukuba inokhetho olufanelekileyo lokulawula iikholamu, ukutshintsha ubungakanani bazo, ukuguqula isitayile sefonti kunye nokulungiselela idatha, kwaye Unako ngokunjalo yabelana ngamaxwebhu nabanye abasebenzisi kwaye ubone ukuhlela kungekudala.
Enye into enqabileyo kukuba ngoku nasiphi na isicatshulwa esikopa kwaye sincamathisele kuGoogle amaXwebhu izogcina ifomathi yayoNgaphandle koko, ngoku ukhetho lokuthumela ikhonkco likuvumela ukuba ukope ikhonkco kwibhodi eqhotyoshwayo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba indlela entsha emfutshane yongezwe kwiscreen sasekhaya kwiifayile zeDrive kunye neefolda, kwaye ngoku kunokwenzeka ukufaka imowudi yokuhlela ngokuthepha nje kumhleli weGoogle Amaxwebhu.
Uhlaziyo lukhutshwe phantsi kwenombolo 1.1.470.11 kwaye ngoku inokukhutshelwa kwiVenkile yokuDlala. Ke ukuba uhlala uhlela amaspredishithi okanye unomdla kuphuculo olutsha, lixesha lokuba uhlaziye iGoogle Drayivu yakho okanye uzame ukuba awukayifaki. Njengedatha ekufuneka ithathelwe ingqalelo, usetyenziso lufuna kuphela I-Android 2.1 okanye ingxelo ephezulu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Amaxwebhu kaGoogle, isicelo semveli se-Android
Imvelaphi I-Google Drayivu ye-Android - Ibhlog ye-Android
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-Google Drayivu ye-Android yongeza umhleli kwiipredishithi
Andifumani nyani, xa ndizama ukuvula kuGoogle Drayivu, ihlala indicela ukuba ndiyixelele ukuba yeyiphi na inkqubo oyisebenzisayo, iofisi, iSebe lePolarois, i-Quickoffice ThinkFree, njl.
Ke iGoogle Drayivu ayisosicelo? Ndiyisebenzisa njengogcino kodwa xa uhlela ifayile indicela ukuba ndibonise ukuba ndivula ntoni na.
Ewe, ikakhulu ukulungiselela iifayile zakho. Amanye amaxwebhu anje ngesicatshulwa kunye nespredishithi ngoku sinokuhlelwa kwi-interface, kodwa kuninzi ufuna usetyenziso lwangaphandle.
Kodwa ngokubona olu hlaziyo, kulindelwe ukuba kancinci kancinci umhleli wemveli kwezinye iintlobo zeefomathi ziya kudityaniswa.
Imidlalo Yezipho (IV): "Ukulwa Kwangoku 3: Isizwe Esiwile"